ဆောရီး ရှင်တို့အခုထိ တူညီတဲ့အခွင့်အရေးမရသေးပါဘူး!!! -
ဆောရီး ရှင်တို့အခုထိ တူညီတဲ့အခွင့်အရေးမရသေးပါဘူး!!!
Posted on December 17, 2018 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
တူညီတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို နားလည်နေပေမဲ့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် မရသေးတဲ့အခါ…..
မိန်းကလေးမှန်ရင် အိမ်ထောင်ပြု၊ ကလေးမွေး၊ အိမ်မှုကိစ္စလုပ် စတဲ့ အတွေးတွေ ရှိနေတုန်းပဲလား? ရုန်းထွက်လိုက်ပါတော့… ခုခေတ်ရဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အဲဒီအခြေအနေတွေကနေ တစ်ဆင့်တက်လို့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာပါပြီ။
အစစအရာရာ ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့ လုပ်ခွင့်ရလာပြီး တစ်ခုခုဆို ယောကျာ်းက သူ့လုပ်စာထိုင်စားနေရတာဆိုတဲ့ စကားမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကို စော်ကားလို့ မရတော့တဲ့ အနေအထားကို စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝမရသေးတဲ့အပြင် ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးရှိလို့ရှိမှန်း တချို့မိန်းကလေးတွေ သိတောင် မသိကြပါဘူး။ တချို့ကျတော့လည်း သိနေပါလျက်နဲ့ သြော်.. ငါ့အရင်ကလူတွေလည်း ဒီလို အခြေအနေမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲဆိုပြီး ရေလိုက်ငါးလိုက် နေလိုက်ကြရာက ကိုယ့်ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးလို့ ဆုံးရှုံးနေမှန်းမသိဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ရောက်ရှိလာတာပါ။
Related Article >>> ကိုယ့်ဆန္ဒသည်သာအဓိက
နှင်း အစချီလိုက်တာကြီးက ကြီးသွားမလားမသိဘူး… ဒါပေမဲ့လေ နှင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလောက်ပြောဆိုပြီး အသိပညာတွေ ပေးနေတာတောင် ဘုမသိဘမသိနဲ့ ကြိတ်ခံသွားရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
ဟိုးတလောတုန်းက နှင်းသူငယ်ချင်းလေး မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ အသက်က ၁၈ နှစ်၊ တစ်ခါမှ ယင်ဖိုတောင်မသမ်းဖူးတဲ့ ကောင်မလေး။ သူနဲ့ယူတဲ့ သတို့သားက အသက် ၂၈ နှစ်။ မိဘချင်းသဘောတူပြီး သတို့သားက ကြိုက်လွန်းလို့ဆိုပြီး လာတောင်းတော့ သူငယ်ချင်းကလည်း ယုံပြီးအမေတို့သဘောဆိုပြီး ခေါင်းညိတ်ချတာ။
တကယ်လည်းယူပြီးရော သတို့သားက သူ့အပေါ်အေးတိအေးစက် ဆက်ဆံတဲ့အပြင် ယူပြီးကာစ အသစ်စက်စက် လင်မယားက ထမင်းလက်ဆုံစားဖို့တောင် မနည်းပင့်ဖိတ်နေရတယ်တဲ့။ တစ်နေကုန် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ လျှောက်သွားနေတော့ နှင်းသူငယ်ချင်းခမျာလည်း မေးရပြီလေ နီးစပ်ရာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို။ ဖြစ်ပုံက အဲဒီသတို့သားမှာ ရည်းစားရှိနှင့်ပြီးသား မိဘကသဘောမတူ အတင်းခွဲလို့ ကဲ ဒီလောက်ဖြစ်လှတာ အမေတို့ပေးစားတဲ့လူနဲ့ပဲ ယူမယ်ဗျာဆိုပြီး ယူသာယူလိုက်တာ ဘာခံစားချက်မှမပါဘူးတဲ့။
သြော် ကိုယ့်မှာလေ နှမြောလွန်းလို့ ရင်ကွဲပက်လက်။ မယူခင်တုန်းက နင်သေချာစုံစမ်းပါဦး ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး ခဏခဏစုံစမ်းခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ သူကလည်း မိဘကိုယုံ၊ သူ့ကို မြင်မြင်ချင်းသဘောကျသွားလို့ဆိုပြီး ရင်တွေခုန်ရင်း မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရက်ကို ထိုင်တွက်နေခဲ့တော့ ဘာမှလည်း မသိ စုံမှိတ်ပြီး ယူချလိုက်ရော။ အခုညတိုင်း နှင်းကို စကားတွေလာပြော ရင်ဖွင့်ရင်း ငိုပဲငိုနေရှာတယ်လေ။ အကယ်၍ သူသာအရင်ကတည်းက မိဘပေးစားတာပဲ ကောင်းမှာပါဆိုတဲ့စိတ်၊ သတို့သားမိဘရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်ဖြစ်ပြတဲ့ အမူအရာတွေကို ချင့်ယုံပြီး သူ့ဘာသာနောက်ကွယ်မှာ သေချာစုံစမ်းခဲ့ရင် ဒီလိုကိစ္စတွေက ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီကိစ္စကတော့ အယုံလွယ်လို့လို့ ထားလိုက်ပါတော့… နောက်ဆက်တွဲ ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ဟာကို နှင်း ပြောချင်တာပါ။
Related Article >>> မှီခိုသူဆိုတဲ့ နာမည်အောက်က ရုန်းထွက်မရနိုင်သေးတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများ
သူက သူ့ယောကျာ်းနဲ့ စကားပြောဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ ဟိုက လုံးဝအပြောမခံတဲ့အပြင် အဆိုးဆုံးက အဲဒီလိုစကားပြောဖို့ ကြိုးစားလည်း ကာမကိစ္စဆီကိုပဲ ဦးတည်ပြီး သူလုပ်ချင်ရာလုပ် ပြန်ဆင်းသွားရောတဲ့။
နှင်းက ပြောတယ် ‘ဟဲ့ လင်မယားမှာလည်း အလိုမတူရင် မုဒိန်းမှုပဲ။ နင့်ကို ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူး’ ဆိုတော့ ‘အခုချိန်မှကွဲရင် ငါကလည်း အပျိုပြန်ဖြစ်တော့တာမှ မဟုတ်တာတဲ့’ တစ်သက်လုံး ရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ အသိ၊ ယဉ်ကျေးမှု ၊ လူမှုရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိုင်းအဝိုင်း စတဲ့ အရာတွေအားလုံးက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို ဒီလောက်အထိ ဆွဲချရိုက်ချိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှ ထင်တောင် မထင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ပြီးတော့ ဥပဒေအရ ဒီလိုမျိုးအလိုမတူဘဲ ကာမကိစ္စပြုတယ်ဆိုတာ လင်မယားဖြစ်သည့်တိုင်အောင် အဓမ္မမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သူတို့ခမျာမသိရှာဘူး။
တကယ်ဆို သူ့ဘေးနားမှာ သူ့ကို နားချပြောဆိုမယ့်လူလည်းရှိတယ်၊ ပြောလည်းပြောပြရဲ့သားနဲ့ ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်သွားတော့ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်သွားတင်ရမလဲ?
တူညီတဲ့ အခွင့်အရေး ရနေပေမဲ့ ဒီလို ရနေတဲ့အကြောင်းကို အမှောင်ချထားခံရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က မိန်းကလေးတွေကိုရော ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ပြောဆိုပေးရမလဲ?
ပြောဆိုပေးသည့်တိုင်အောင် လက်ခံလာတဲ့အထိ ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ?
အုပ်ထိန်းသူတွေကိုရော မိန်းကလေးတစ်ယောက် အိမ်ထောင်မကျခင် အိမ်မှုကိစ္စနဲ့ ယောက်ျားအပါအဝင် ဆွေမျိုးအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာ မီးသေပြီး ပြားပြားဝပ်နေအောင် နေဖို့အတွက် သင်ပေးနေမယ့်အစား သူတို့တွေမှာ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်၊ ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရမယ်၊ ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှ ဆွဲခေါ်လို့မရတော့ရင် ရောက်တဲ့အရပ်မှာထားခဲ့ပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင် ဘယ်လိုရုန်းကန်ရမလဲဆိုတာကို သင်ပေးနိုင်အောင် ဘယ်လိုပညာပေးရမှာလဲ?
ဒီလိုနဲ့ နှင်းတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခြေလှမ်းကို နောက်ဆုတ်နေရဦးမှာလား?
အခွင့်အရေးဆိုတာ ရှိမှန်းသိနေရဲ့သားနဲ့ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်မဆုပ်နိုင်တာကလည်း တူညီတဲ့အခွင့်အရေးရနေပါပြီလို့ တစ်ထစ်ချမဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ မြင်သာမြင်ရ မကြင်ရဘဝမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။
ဆိုလိုတာကလေ ဘယ်ဟာက ကိုယ့်အခွင့်အရေးလဲ ဆိုတာမှန်းသိနေတယ်၊ ဒါတွေ ကြုံလာရင် ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာလည်း သိနေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကြောင့်၊ ဘာကြောင့် ၊ ညာကြောင့်.. အမျိုးမျိုးသော ကြောင့်တွေကြောင့် အခွင့်အရေးဆိုတာကို သိလျက်နဲ့ မပိုင်ဆိုင်ရတာပါ။
ဆိုတော့ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို အပိုင်ရဖို့ ကိုယ်တိုင် တိုက်ယူရမှာပါ။ အခွင့်အရေးတွေ တူညီစွာရရှိနိုင်ဖို့ တောင်းနိုင်သေးတယ်ဆိုရင် တူညီတဲ့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုဆိုတာက နောက်က လိုက်လာဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့…
ဒီလို မြင်သာ မြင်ရ၊ မကြင်ရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမြင်ရတိုင်း ရင်နာရပေါင်းလည်း မနည်းတော့ပါဘူး… ဒီအချိန်တွေတိုင်းမှာ ပြောချင်တဲ့ စကားကလည်း တစ်ခုတည်းပါပဲ.. ဆောရီး ရှင်တို့အခုထိ တူညီတဲ့အခွင့်အရေးမရသေးပါဘူးလို့…
Hnin Ei Oo (For Her Myannmar)
တူညီတဲ့အခှငျ့အရေးဆိုတာကို နားလညျနပေမေဲ့ လကျဆုပျလကျကိုငျ မရသေးတဲ့အခါ…..
မိနျးကလေးမှနျရငျ အိမျထောငျပွု၊ ကလေးမှေး၊ အိမျမှုကိစ်စလုပျ စတဲ့ အတှေးတှေ ရှိနတေုနျးပဲလား? ရုနျးထှကျလိုကျပါတော့… ခုခတျေရဲ့ မိနျးကလေးတှဟော အဲဒီအခွအေနတှေကေနေ တဈဆငျ့တကျလို့ ကိုယျပိုငျဝငျငှကေို ကိုယျတိုငျရှာဖှေ ရပျတညျနိုငျတဲ့ အခွအေနကေို ရောကျလာပါပွီ။
အစစအရာရာ ကိုယျ့ခွကေိုယျ့လကျနဲ့ လုပျခှငျ့ရလာပွီး တဈခုခုဆို ယောကျြားက သူ့လုပျစာထိုငျစားနရေတာဆိုတဲ့ စကားမြိုးနဲ့ ကိုယျ့ကို စျောကားလို့ မရတော့တဲ့ အနအေထားကို စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပွီဆိုပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ တူညီတဲ့ အခှငျ့အရေးကို အပွညျ့အဝမရသေးတဲ့အပွငျ ဒီလိုအခှငျ့အရေးမြိုးရှိလို့ရှိမှနျး တခြို့မိနျးကလေးတှေ သိတောငျ မသိကွပါဘူး။ တခြို့ကတြော့လညျး သိနပေါလကျြနဲ့ သွျော.. ငါ့အရငျကလူတှလေညျး ဒီလို အခွအေနမြေိုး ကွုံတှခေဲ့ရတာပဲဆိုပွီး ရလေိုကျငါးလိုကျ နလေိုကျကွရာက ကိုယျ့ရဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ဆုံးရှုံးလို့ ဆုံးရှုံးနမှေနျးမသိဆိုတဲ့ အခွအေနမြေိုးကို ရောကျရှိလာတာပါ။
Related Article >>> ကိုယျ့ဆန်ဒသညျသာအဓိက
နှငျး အစခြီလိုကျတာကွီးက ကွီးသှားမလားမသိဘူး… ဒါပမေဲ့လေ နှငျးပတျဝနျးကငျြမှာ ဒီလောကျပွောဆိုပွီး အသိပညာတှေ ပေးနတောတောငျ ဘုမသိဘမသိနဲ့ ကွိတျခံသှားရတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ရှိနပေါသေးတယျ။
ဟိုးတလောတုနျးက နှငျးသူငယျခငျြးလေး မင်ျဂလာဆောငျတယျ။ အသကျက ၁၈ နှဈ၊ တဈခါမှ ယငျဖိုတောငျမသမျးဖူးတဲ့ ကောငျမလေး။ သူနဲ့ယူတဲ့ သတို့သားက အသကျ ၂၈ နှဈ။ မိဘခငျြးသဘောတူပွီး သတို့သားက ကွိုကျလှနျးလို့ဆိုပွီး လာတောငျးတော့ သူငယျခငျြးကလညျး ယုံပွီးအမတေို့သဘောဆိုပွီး ခေါငျးညိတျခတြာ။
တကယျလညျးယူပွီးရော သတို့သားက သူ့အပျေါအေးတိအေးစကျ ဆကျဆံတဲ့အပွငျ ယူပွီးကာစ အသဈစကျစကျ လငျမယားက ထမငျးလကျဆုံစားဖို့တောငျ မနညျးပငျ့ဖိတျနရေတယျတဲ့။ တဈနကေုနျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ပဲ လြှောကျသှားနတေော့ နှငျးသူငယျခငျြးခမြာလညျး မေးရပွီလေ နီးစပျရာသူ့ပတျဝနျးကငျြက လူတှကေို။ ဖွဈပုံက အဲဒီသတို့သားမှာ ရညျးစားရှိနှငျ့ပွီးသား မိဘကသဘောမတူ အတငျးခှဲလို့ ကဲ ဒီလောကျဖွဈလှတာ အမတေို့ပေးစားတဲ့လူနဲ့ပဲ ယူမယျဗြာဆိုပွီး ယူသာယူလိုကျတာ ဘာခံစားခကျြမှမပါဘူးတဲ့။
သွျော ကိုယျ့မှာလေ နှမွောလှနျးလို့ ရငျကှဲပကျလကျ။ မယူခငျတုနျးက နငျသခြောစုံစမျးပါဦး ဟုတျရဲ့လားဆိုပွီး ခဏခဏစုံစမျးခိုငျးခဲ့ပမေဲ့ သူကလညျး မိဘကိုယုံ၊ သူ့ကို မွငျမွငျခငျြးသဘောကသြှားလို့ဆိုပွီး ရငျတှခေုနျရငျး မင်ျဂလာဆောငျဖို့ရကျကို ထိုငျတှကျနခေဲ့တော့ ဘာမှလညျး မသိ စုံမှိတျပွီး ယူခလြိုကျရော။ အခုညတိုငျး နှငျးကို စကားတှလောပွော ရငျဖှငျ့ရငျး ငိုပဲငိုနရှောတယျလေ။ အကယျ၍ သူသာအရငျကတညျးက မိဘပေးစားတာပဲ ကောငျးမှာပါဆိုတဲ့စိတျ၊ သတို့သားမိဘရဲ့ သညျးသညျးလှုပျဖွဈပွတဲ့ အမူအရာတှကေို ခငျြ့ယုံပွီး သူ့ဘာသာနောကျကှယျမှာ သခြောစုံစမျးခဲ့ရငျ ဒီလိုကိစ်စတှကေ ဖွဈလာမှာမဟုတျဘူးလေ။ ဒီကိစ်စကတော့ အယုံလှယျလို့လို့ ထားလိုကျပါတော့… နောကျဆကျတှဲ ထပျဖွဈလာတဲ့ဟာကို နှငျး ပွောခငျြတာပါ။
Related Article >>> မှီခိုသူဆိုတဲ့ နာမညျအောကျက ရုနျးထှကျမရနိုငျသေးတဲ့ မွနျမာအမြိုးသမီးမြား
သူက သူ့ယောကျြားနဲ့ စကားပွောဖို့ ကွိုးစားပမေဲ့ ဟိုက လုံးဝအပွောမခံတဲ့အပွငျ အဆိုးဆုံးက အဲဒီလိုစကားပွောဖို့ ကွိုးစားလညျး ကာမကိစ်စဆီကိုပဲ ဦးတညျပွီး သူလုပျခငျြရာလုပျ ပွနျဆငျးသှားရောတဲ့။
နှငျးက ပွောတယျ ‘ဟဲ့ လငျမယားမှာလညျး အလိုမတူရငျ မုဒိနျးမှုပဲ။ နငျ့ကို ဒီလိုလုပျလို့မရဘူး’ ဆိုတော့ ‘အခုခြိနျမှကှဲရငျ ငါကလညျး အပြိုပွနျဖွဈတော့တာမှ မဟုတျတာတဲ့’ တဈသကျလုံး ရိုကျသှငျးခဲ့တဲ့ ဓလထေုံ့းတမျး၊ အသိ၊ ယဉျကြေးမှု ၊ လူမှုရေး၊ ပတျဝနျးကငျြ၊ အသိုငျးအဝိုငျး စတဲ့ အရာတှအေားလုံးက မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ဘဝကို ဒီလောကျအထိ ဆှဲခရြိုကျခြိုးနိုငျလိမျ့မယျလို့ တဈခါမှ ထငျတောငျ မထငျခဲ့ဖူးဘူး။ ပွီးတော့ ဥပဒအေရ ဒီလိုမြိုးအလိုမတူဘဲ ကာမကိစ်စပွုတယျဆိုတာ လငျမယားဖွဈသညျ့တိုငျအောငျ အဓမ်မမှုဖွဈတယျဆိုတာကိုလညျး သူတို့ခမြာမသိရှာဘူး။
တကယျဆို သူ့ဘေးနားမှာ သူ့ကို နားခပြွောဆိုမယျ့လူလညျးရှိတယျ၊ ပွောလညျးပွောပွရဲ့သားနဲ့ ဒါဖွဈတတျပါတယျဆိုပွီး ဖွဈသှားတော့ ဘယျသူ့ကို အပွဈသှားတငျရမလဲ?
တူညီတဲ့ အခှငျ့အရေး ရနပေမေဲ့ ဒီလို ရနတေဲ့အကွောငျးကို အမှောငျခထြားခံရတဲ့ ပတျဝနျးကငျြက မိနျးကလေးတှကေိုရော ဘယျသို့ဘယျပုံ ပွောဆိုပေးရမလဲ?
ပွောဆိုပေးသညျ့တိုငျအောငျ လကျခံလာတဲ့အထိ ဘယျလိုလုပျပေးရမလဲ?
အုပျထိနျးသူတှကေိုရော မိနျးကလေးတဈယောကျ အိမျထောငျမကခြငျ အိမျမှုကိစ်စနဲ့ ယောကျြားအပါအဝငျ ဆှမြေိုးအပေါငျးသူတျောကောငျးတှရှေမှေ့ာ မီးသပွေီး ပွားပွားဝပျနအေောငျ နဖေို့အတှကျ သငျပေးနမေယျ့အစား သူတို့တှမှော ဘယျလိုအခှငျ့အရေးတှရှေိတယျ၊ ဘယျလိုညှိနှိုငျးရမယျ၊ ပွီးတော့နောကျဆုံးဘယျလိုမှ ဆှဲချေါလို့မရတော့ရငျ ရောကျတဲ့အရပျမှာထားခဲ့ပွီး ကိုယျ့ဘဝကိုယျ ပုံမှနျအတိုငျးဖွဈအောငျ ဘယျလိုရုနျးကနျရမလဲဆိုတာကို သငျပေးနိုငျအောငျ ဘယျလိုပညာပေးရမှာလဲ?
Related Article >>> တဈခုလပျဆိုတာနဲ့ တနျဖိုးမဲ့သှားပွီလား
ဒီလိုနဲ့ နှငျးတို့အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ခွလှေမျးကို နောကျဆုတျနရေဦးမှာလား?
အခှငျ့အရေးဆိုတာ ရှိမှနျးသိနရေဲ့သားနဲ့ ဒီအခှငျ့အရေးကို လကျဝယျမဆုပျနိုငျတာကလညျး တူညီတဲ့အခှငျ့အရေးရနပေါပွီလို့ တဈထဈခမြဆိုနိုငျသေးပါဘူး။ မွငျသာမွငျရ မကွငျရဘဝမှာပဲရှိနပေါသေးတယျ။
ဆိုလိုတာကလေ ဘယျဟာက ကိုယျ့အခှငျ့အရေးလဲ ဆိုတာမှနျးသိနတေယျ၊ ဒါတှေ ကွုံလာရငျ ဘယျလို ရငျဆိုငျရမယျဆိုတာလညျး သိနတေယျ၊ ဒါပမေဲ့ ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့၊ ဓလထေုံ့းတမျးတှကွေောငျ့၊ ဘာကွောငျ့ ၊ ညာကွောငျ့.. အမြိုးမြိုးသော ကွောငျ့တှကွေောငျ့ အခှငျ့အရေးဆိုတာကို သိလကျြနဲ့ မပိုငျဆိုငျရတာပါ။
ဆိုတော့ ကိုယျ့အခှငျ့အရေးကို အပိုငျရဖို့ ကိုယျတိုငျ တိုကျယူရမှာပါ။ အခှငျ့အရေးတှေ တူညီစှာရရှိနိုငျဖို့ တောငျးနိုငျသေးတယျဆိုရငျ တူညီတဲ့ တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှုဆိုတာက နောကျက လိုကျလာဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့…
ဒီလို မွငျသာ မွငျရ၊ မကွငျရတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး၊ အမြိုးသမီးအခှငျ့အရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကိစ်စတှမွေငျရတိုငျး ရငျနာရပေါငျးလညျး မနညျးတော့ပါဘူး… ဒီအခြိနျတှတေိုငျးမှာ ပွောခငျြတဲ့ စကားကလညျး တဈခုတညျးပါပဲ.. ဆောရီး ရှငျတို့အခုထိ တူညီတဲ့အခှငျ့အရေးမရသေးပါဘူးလို့…
Tagged basic, chances, empowerment, girls, Human, Power, right, same
experience Letters From Heart
ပတ်စ်ပို့ရုံးမှာ ထိုင်ငိုခဲ့ရသော ထိုတစ်နေ့
Posted on November 6, 2018 Author Sugar Cane
ဘာဖြစ်လို့ ထိုင်ငိုခဲ့ရလဲ သိချင်ရင်ဝယ်ဖတ်ပါ အဲ ဝင်ဖတ်ပါ
နူးညံ့တဲ့လက်ချောင်းလေးတွေ ပါးရိုက်ပစ်ဖို့လည်း ဝန်မလေးသင့်တော့ပါ
Posted on April 24, 2018 July 25, 2018 Author Hnin Ei Oo
ဘာဝတ်ထားလဲမှမသိတာလို့ မပြောရဘူးနော်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒသိက္ခာကို အဝတ်အစားကြောင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာ ခေါင်းထဲဘာတွေနဲ့များ ပြည့်နေတဲ့လူတန်းစားမို့လဲ?
Third wheel မဟုတ်တော့သော 7th wheel ကျွန်မ
Posted on January 7, 2019 January 7, 2019 Author Hnin Ei Oo
အမလေး သုံးတဲ့အကွက်တွေကလည်း အညာစောင်ကျနေတာပဲ။ အရောင်စုံ အဆင်ဆန်းတွေ :’)
2018 Miss Universe သရဖူကိုဆွတ်ခူးသွားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ် Catriona Gray
ထောင်ထဲမှာပဲ ကြီးပြင်းသွားရမယ့် ဆယ်ကျော်သက်များ